304Stainless simbi Distributor
90 ° mhangura kugokora
M mhangura matatu
T mhangura matatu
U mhangura gokora
Welded mutopota Fittings
Y mhangura matatu
Copper mutopota Fittings
Water kuyerera Distributor
2 nzira kuyerera Distributor
3 nzira kuyerera Distributor
4 nzira kuyerera Distributor
6 nzira kuyerera Distributor
Yueqing hengsheng Refrigeration nenhumbi co., Ltd.. riri mune romumhenderekedzo yegungwa guta rakashama -. In songhu maindasitiri vematunhu, leqing guta, Wenzhou guta, Zhejiang rwenyika, kambani unyanzvi mukubudisa mhando dzose kurudza coils mvura muunganidzwa misoro, emura dispensers uye mvura dispensers (Distributor), brazed vadyi, yavaibvisa cuprate, gungano Gas muteresi, U - akaita sepombi nokurondedzerwa siyana, uye mhepo kutonhodza sepombi dzemhangura, etc.The kambani akatotanga vakapfuura ISO 9001 yepamusoro hurongwa advertising, uye akaramba nani pamwe ISO 9001 mureza, tichishumira vanoshandisa nomwoyo wose sezvo nguva dzose.
Kubvira pahwakagadzwa muna 1996, boka kwakaramba vakasuma yemhando zvokushandisa, vakawedzera nyanzvi uye michina vashandi, uye akatanga yemhando utariri muoti. ine nhamba vasabatwa mano, multifunctional hydraulic pachaunga nyere Bender, polisher, Dryer, lathes ose nokurondedzerwa siyana, dziwande aidzora lathes uye zvibhakera.
The kambani successively akagovera nhevedzano siyana kutsigira zvinhu nokuda Panasonic, sanyo, inotakura, Dunham gwenzi, Tsinghua tongfang, RC, gaokelian, Haier, Bailette nemamwe mabhizimisi vakakurumbira. Uye Export kuna Europe, America, kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAsia uye dzimwe nyika uye kumatunhu.
The kambani iri zvinoenderana nheyo yepamusoro wokutanga, kuvimbika pakutanga, uye aiming pa "kutevera Excellence, mutengi wokutanga, Achivakira pane mudzimba uye akatarisana nenyika", uye anoda pamwe nemwoyo wose pamwe navo kubva mumamiriro ose oupenyu uye kutanga pamwe .